FAMPAHALALANA SY SARY WOLF WOLF - ALIKA
Fampahalalana sy sary Wolf Wolf
'Saripikan'i Tykoda zanako lahy ireto. Izy dia hybrid 1 He taona. Ny reniny sy ny rainy dia amboadia hazo atsinanana sy kanadiana. Ny renibeny dia amboadia mifangaro koa. Rehefa nijery ny sarinao aho dia nahita biby mitovy aminy. Nanavotra zaza 8 volana talohan'ny Ty aho ary voatery nametraka azy noho ny fahasarotana. Ilay teknôlôjia vet izay nanampy ahy niaraka taminy dia nivadika ho mpiompy. Nandalo ny fanahy ary nanolotra ahy Ty ny mpiompy. Niaraka izahay hatramin'ny faha-5 taonany, ary nitety ny faritra afovoany andrefana sy atsimo atsinanana. Mety tsy hisy ny fanahy fa notahina tamin'ny biby tsara indrindra aho hatramin'izay. Manana ny sariny aho hatramin'ny andro nahaterahany ka hatramin'ny vao tsy ela akory izay. Ankafizo ary fantaro fa eo am-pelatanana izy. '
Amboadia hazo amerikana atsinanana
Wolf Timber Atsinanana
Amboadia volondavenona atsinanana
Wolf Timber Kanadiana
Amboadia kanadianina atsinanana
Amboadia mena avy any atsinanana
Ny loko palitao dia manomboka amin'ny volondavenona manjary mainty ka hatramin'ny fotsy rehetra.
Ny amboadia hazo any an'ala matetika dia hita ao anaty fonosana biby dimy ka hatramin'ny 12. Misy alfa lahy iray ary vehivavy alpha iray ao anaty fonosana. Ny ambaratongan'ny biby manjaka sy ambany ao anaty fonosana dia manampy azy ireo hiasa toy ny singa iray. Vehivavy iray ao anaty fonosana ihany no miteraka isan-taona ho an'ny lahy alfa. Ny fonosana dia mifampiresaka amin'ny alàlan'ny tenim-batana, ny endrika isehoan'ny tarehy, ny hanitra ary ny feo toa ny fidradradradrana. Ny fitsipiky ny fonosana dia tena zava-dehibe amin'izy ireo, satria ny voajanahary dia milaza azy ireo fa miankina amin'izy ireo ny fahavelomany. Ireo mpikambana ambany dia mijery ny alika lahy sy ny vavy alpha raha hitady lalana. Ny sakafon'izy ireo dia misy bison, moose, elk, caribou, serfa, bitro, hare, beaver, totozy ary biby mpikiky hafa, ary trondro miaraka amin'ny biby hafa. Ny olona sasany dia manana amboadia amam-borona toy ny biby fiompy. Ny amboadia hazo miaina toy ny biby fiompy dia mbola mitazona ny voajanahary voajanahary naterak'izy ireo.
Hahavony: 26-33 santimetatra (66-83 cm.)
Lanja: 40-175 pounds (18-79 kg.)
Halavan'ny vatana: 40-58 santimetatra (101-147 cm.)
king charles spaniel lab mix
Ny amboadia hazo dia miaina anaty fonosana, izay rafitra sosialy sarotra.
Ny amboadia hazo any an'ala dia mazàna manaraka ny fifindra-monin'ny rembiny. Matetika ny lehilahy dia mijanona ao anatin'ny 70 kilaometatra miala ny faritanin'izy ireo. Matetika ny vehivavy dia mikatona kely kokoa, mania tsy mihoatra ny 48 kilaometatra miala ny faritaniny. Rehefa lasa lavitra izy ireo dia matetika no mitady fonosana vaovao. Amin'ny antsalany, fonosana amboadia dia handeha manodidina ny 30 kilaometatra isan'andro. Ny amboadia hazo any am-pigadrana dia mbola mitazona ny toe-tsaina mivezivezy ary tokony horaisina mandeha isan'andro toerana anaovana azy ireo ho voditongotra eo akaikin'ilay na aorian'ilay olona mitazona ny tadiny.
laboratoara fotsy pitbull mifangaro sary
Manodidina ny 5 ka hatramin'ny 10 taona any an'ala, lava kokoa amin'ny fahababoana.
Ankizy 5 ka hatramin'ny 6 eo ho eo
Ny amboadia hazo dia hita any Amerika Avaratra, Eoropa ary Azia. Amboadia hazo, toy ny amboadia hafa rehetra, dia zanaky ny amboadia volondavenona. Ny amboadia amboadia dia mifandraika amin'ny alikadia, amboadia ary alika ao an-trano. Biby fonosana miaina miaraka amina rafitra voarindra sy hentitra ary milamina izy ireo.
Amboadia volondavenona Meksikana. Doko akrilika sy pensilihazo miloko, mpanakanto Lois Hassel
Tykoda ny amboadia hazo atsinanana sy kanadiana dia mifangaro rehefa olon-dehibe.
Tykoda ny amboadia hazo atsinanana sy kanadiana dia mifangaro toy ny alika kely.
Tykoda ny amboadia hazo atsinanana sy kanadiana dia mifangaro amin'ny alika kely.
Tykoda ny amboadia hazo atsinanana sy kanadiana dia mifangaro amin'ny alàlan'ny alika kely sy ny mpiray tam-po aminy.
sary an'ny mastiff omby
Pug poodle afangaro amidy
sarin'alika alika kely